यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण - नेपालबहस
यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण
२५ जेठ २०७८ | १०:११:४४ मा प्रकाशित
२५ जेठ, काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष औसत मितिभन्दा अगाडि नै नेपालमा मनसुन भित्रिने पूर्वानुमान गरेकाे छ । नेपालमा मनसुन सुरु हुने औसत मिति जुन १३ तारिख हो । मौसमविदका अनुसार त्यस अगाडि नै यस वर्षको मनसुन सुरु हुने सम्भावना छ ।
यता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्षको मनसुनमा नेपालका धेरैजसो स्थानमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालमा साधारणतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चार महिनाको अवधिलाई दक्षिण एसियाली मनसुनको अवधि भनेर भनिन्छ ।
मनसुन आगमनको अवस्थाबारे सोमबार पनि छलफल गरेका उनीहरुले मंगलबार पनि छलफल गर्दैछन् । अहिलेसम्मको छलफलले नेपालमा मनसुनका लागि अनुकूल गतिविधि बढ्दै गएको र जुन १३ अघि नै भित्रिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पूर्वी नेपालबाट मनसुन भित्रिने र पश्चिम नेपालबाट बाहिरिने गर्दछ । केही दिनयता पूर्वी क्षेत्रतिर मनसुन अनुकुलको वातावरण बन्दै गएकाले पानी पर्ने क्रम जारी छ । सोमबार र मंगलबार पनि पूर्वी नेपालका केही भागमा हल्का पानी परेको थियो । केही दिनयता बादल लाग्ने र हल्का पानी पर्ने गरिरहनुलाई मनसुन सुरु हुने पूर्वसंकेतको रुपमा लिइएको छ ।
मंगलबार जारी मौसमी बुलेटिन अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार र बिहीबार पनि केही प्रदेशमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । महाशाखाले मंगलबार जारी गरेको तीन दिने मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार मंगलबार प्रदेश १, २, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । तर बुधबार र बिहीबार भने केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
आगामी २४ घण्टामा भने पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहे पनि उच्च वर्षाको सम्भावना कम रहेको मौसमी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
अबको एक साता नेपालको आकाशमा घाम नलाग्ने २ दिन पहिले
आज साँझ पनि मेघगर्जनसहित बर्षाको सम्भावना ३ दिन पहिले
माइतीको संरक्षणमा बसेकी राईको बन्यो घर १४ मिनेट पहिले
निलम्बित एमाले सांसदहरु प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिने ! १६ मिनेट पहिले
शाङ्पा फाउण्डेशनद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग २१ मिनेट पहिले
उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, अब साँझबिहान हिँडडुलदेखि केही व्यापार गर्न पाइने २२ मिनेट पहिले
कांग्रेस नेता खतिवडाले गरे अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग २९ मिनेट पहिले
गर्भवतीलाई नगरपालिकाको पोसिलो खाना उपहार १६ घण्टा पहिले
लगातारको पानीले धेरै नदी तथा खोलामा बाढी: सतर्कता अपनाउन आग्रह ३ घण्टा पहिले
भारतले महाकाली थुनेर सडक बनाउँदा नेपालको बाटोमा क्षति १९ घण्टा पहिले
कोरोना संक्रमण जोखिम र निषेधाज्ञाका बीच डसना बनाउँदै ४ दिन पहिले
कोरोना महामारीको मारमा साना व्यापारी ६ दिन पहिले
कोरोना महामारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै तिनाउ ६ दिन पहिले
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमा संक्रमणको उच्च जोखिम २ हप्ता पहिले
सञ्चालन हुन सकेन् प्रदेश सरकारले दिएको भेन्टिलेटर ४ हप्ता पहिले
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामीमा, शेयरमूल्य कति ? ५ दिन पहिले
राजनीतिसँगै कृषि कर्ममा लागेका सन्तोष ३ हप्ता पहिले
हास्नु स्वास्थ्यका कति फाइदा ? थाहा पाउनुस ! ६ महिना पहिले
परराष्ट्रमन्त्री भारत जाँदै ५ महिना पहिले
सिटी जेसीजको सप्ताहव्यापी पुरस्कार सम्पन्न २ वर्ष पहिले
कोभिड–१९ पछि योगको थप सान्दर्भिकता बढ्यो : प्रधानमन्त्री ओली ५ महिना पहिले